Namhlanje ngumhla wehlabathi wabathandi bokufunda | Uncwadi lwangoku
Namhlanje lusuku lwehlabathi lokufunda abathandi
Namhlanje sonke esenza le portal inokwenzeka, oko kukuthi, nobabini abafundi bethu ukuba usilandele imihla ngemihla njenge kuthiIqela lokubhala, uyilo kunye nolwalathiso lwalo blog, sinethamsanqa. Lusuku lwethu! Njengokuba kukho usuku phantse kuyo yonke into, asinakuphuthelwa yenye yezo zinto ziphambili okanye enye yezona zinto sizithandayo sizifundayo.
Silufanele usuku kuba ...
Siyazazi iindaba zokuhlela esithanda kakhulu, ngakumbi xa kufikwa kubabhali esibathandayo.
Sibhiyozela ngovuyo olukhulu ukuqhubeka kwethu Isaga yoncwadi oluthandayo okanye incwadi entsha yombhali esenza ukuba "sisele" iincwadi ngokungathi akukho lakusasa.
Bathi simbalwa, kwaye bambalwa kwaye bambalwa abantu abafundayo ... Kwaye sifuna ukukholelwa ukuba bubuxoki obo, kwaye sithi ukufunda okuncinci kwabanye kungenxa yokunqongophala kwenkuthazo okanye kwincwadi yokuba ngamanye amaxesha kubiza kakhulu ... Kodwa, kunye mathala eencwadi? Ngokuqinisekileyo, abanazizathu ... Kuya kufuneka ufunde ngakumbi nangcono.
Siyakonwabela njengabantwana kwesiqhelo incwadi Fair… Ngapha koko, abanye bethu bagcina lo mhla: ubuncinci iikopi ezimbini ezitsha kunye nelona nani liphezulu leencwadi esinokuzithenga… Uxolo, kodwa azikho.
Nge kuphela thatha incwadi, uyive, uthande ikhava yayo, funda ikhava yayo yangasemva, Sele sikonwabele! Sifana nabantwana abancinci izihlangu ezintsha.
Amabali amatsha asizalisa, zisenza ukuba sihambe siye kwamanye amaxesha, nakwezinye iidolophu, yinyani okanye imnandi,… Sifumanisa imihlaba emitsha, iimbono ezintsha, izinto ezintsha ezenzekayo.
Sabelana ngokuthanda ukufunda nabanye abanako: ukutshintshiselana ngezimvo, ukwabelana ngamaxesha okufunda, ukwabelana ngeencwadi, njl.
Sibhiyozela ukuba kusekho uthungelwano lukamabonakude olubheja kwi literatura. Kwaye nangona sikholelwa ukuba namhlanje alinikwanga lonke ixabiso eliyifaneleyo, kuyavunywa ukuba iindawo zikamabonakude zisadluliselwa kuyo nokuba zincinci.
Ngezi zizathu nezinye ezininzi, USUKU OLONWABILEYO LOKUFUNDA ABATHANDI USUKU!
Yiyiphi incwadi oyibhiyozela ngayo? Sitshele kwicandelo lamagqabaza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Namhlanje lusuku lwehlabathi lokufunda abathandi
Oko kuyandikhumbuza ukuba kufuneka ndigqibe ukufunda uDon Quixote, ndisafunda isahluko 47 😎.
IQumrhu leNkcubeko i-El Taller sitsho
Namhlanje lusuku olukhethekileyo kuba ndifunde UMSEBENZI OKHETHWEYO nguJOSÉ MANUEL ARANGO, imbongi yaseColombia eyayizalwe ngo-1937 yaza yasweleka ineminyaka engama-64, ngo-2002 eMedellín, apho yayinguNjingalwazi weFilosofi kwiYunivesithi yaseAntioquia. Umsebenzi wakhe wemibongo ukwincwadi ezintlanu: Le ndawo yobusuku, imiqondiso, iCantiga, iiNtaba kunye nokufa kwakhe Umhlaba womntu wephupha. Wayengumguquleli oqaqambileyo weembongi zaseMelika. Wafumana umahluko obalulekileyo.
Kubahlobo bokufunda kwaye ngakumbi abo bathanda umbongo, wazisa le mbongi imangalisayo. Eminye yemibongo yakhe iyafumaneka kwi-Intanethi. Abo bafuna ukwazi ngakumbi, babhalele indibaniselwano.cultural.eltaller@gmail.com
Yahlula umoya ophembelela ilangatye
Phendula kwi-El Taller Cultural Corporation
Kutheni ubhiyozela ukuba yincwadi kunye nomthandi wokufunda wosuku olunye?
Ndingumthandi weencwadi kwaye ndiyafunda; sifana nehashe le-savanna, «… alinaxesha okanye umhla kwikhalenda».
Imibuliso evela eVeracruz, Ver.
Iincwadi zeHlabathi: Amarhe okuSurf, ngu-Yukio Mishima
I-Trajano Trilogy, nguSantiago Posteguillo. Kwiinkulungwane ezili-19 emva kokufa komlawuli omkhulu waseSpain.